Ampidino Real Racing 3 APK ho an'ny Android
Ampidino Real Racing 3
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Android (6.10 MB)
Ampidino Real Racing 3,
Real Racing 3 dia lalao hazakazaka nomaninireo injeniera EA ary lalao fahatelo aminny andiany Real Racing.
Ho anity kinova ity, izay nomanina ho anireo mpampiasa Android, dia tsy maintsy milaza aloha isika fa aorianny fisintomana ny lalao dia hisintona rakitra marobe avy ao anatinny lalao. Na dia miseho ho 6 MB ao aminny magazay aza dia mitaky habaka lehibe kokoa ny lalao.
Real Racing 3, izay mampiantrano fiara am-polony manana alàlanny mpanamboatra fiara fanatanjahan-tena toy ny Porsche sy Lamborgini, dia manana fiara 45. Ho fanampinizany, karazana hazakazaka an-jatony maro no atolotra amina taranja mihoatra ny roapolo.
Andao ampiana fa ny lalao dia tsy heverina ho mety ho anny mpampiasa latsaky ny 13 taona.
Haben'ny rakitra: 6.10 MB